North North Cyprus inova nyika yekutanga kubvisa COVID-19?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » North North Cyprus inova nyika yekutanga kubvisa COVID-19?
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Cyprus Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Yakakurumbira nzvimbo yezororo North North inogona kunge iri nyika yekutanga kuzvisunungura zvizere pairi Covid-19, isina nyaya nyowani kubvira 19 Kubvumbi 2020. Kune vanoita zororo vachitsvaga yakachengeteka uye isina hutachiona isina 2020 kana 2021 nzvimbo yezororo, North Cyprus inofanirwa kuve yavo Nha. 1 sarudzo. Iine chete 108 makesi akazara kubvira yekutanga kesi yakasimbiswa munaKurume, murwere wekupedzisira kupora kubva ku coronavirus muNorth Cyprus achasiya chipatara svondo rino apora zvizere.
North Kupro ndiyo chete nzvimbo huru yezororo yekuEurope ine pasi pegumi neshanu yakasimbiswa kesi dze coronavirus, sekureva kweJohn Hopkins University Coronavirus Resource Center. Kubudirira kunoshamisa kweNorth Cyprus, inodiwa zvikuru nevanozorora vekuUK vanouya kuzuva, mahombekombe ane jecha, uye mitengo muTurkey lira, kwete euros.
Kubva 1974, chitsuwa cheCyprus chakakamurwa kuva Turkish Cypriot kuchamhembe (iyo Turkish Republic yeNorth Cyprus, kana TRNC) uye Greek Cypriot yekumaodzanyemba (Republic of Cyprus). Hukama pakati pezvikamu zviviri zveichi chitsuwa hwave nerunyararo kwemakore makumi maviri apfuura, nekuyambuka muganho tsika chete.
Pakabvumidzwa kesi yekutanga yekoronavirus muNorth Cyprus musi wa10 Kurume, hurumende yeTrNC yakashanda nekukurumidza. Musi wa11 Kurume, yakavhara nhandare dzese nemuganhu, uye musi wa16th Kurume kwakavhara zvikoro. Chero ani zvake aipinda muTrNC kubva kunze kwenyika aisendiswa kwake oga mumahotera kwemazuva gumi nemana. Yakasarudzika nguva yemasikati yakakiyiwa yakatanga kushanda, pamwe nehusiku-nguva yekubuda nguva pakati pa14pm na9am. Kuedzwa kwakatanga kare kuti uone kesi nyowani.
Aya matanho akakonzera mune inoyevedza midziyo yecoronavirus muNorth Cyprus. Pave nemhosva chete zana nemakumi masere nezviuru, nemakumi masere nematatu ematare atoveporeswa nekudzokera kudzimba dzavo uye kumhuri. Kubva musi wa108 Chivabvu 103, nguva yekusvika pamba yakasimudzwa, kutanga kweshanduko zvishoma nezvishoma kudzokera kuhupenyu hwese pachiwi.
Idzi inhau dzakanaka dzevashanyi vekuUK vachitsvaga yezororo isina zhizha remuchakona kana zororo rechando. Nemazuva anopfuura makumi matatu nemashanu ezuva pagore, North Kupro inowanzo gamuchira vashanyi vanobva kuUK gore rese, vachijoinha huwandu hukuru hwevaimbove pat avo vakaita North Cyprus imba yavo.
Idzo zvakare nhau dzakanaka kune akawanda mahotera, maresitorendi, mabhawa uye zvinokwezva muNorth Cyprus, vane shungu dzekugamuchira vashanyi veUK kuti vadzokere uye kuzorora mushure mekuvhara kwavo kwenguva refu.
Saka, vashanyi vanogona kutanga kubhuka zororo rezhizha zvakare nechivimbo? North Cyprus zvechokwadi inotenda kudaro!